​ ​ Visa fizahan-tany any India
Visa fizahan-tany any India
Ny antsipiriany rehetra tokony ho fantatrao momba ny Indian Tourist Visa dia misy eto amin'ity pejy ity. Azafady mba alao antoka fa mamaky amin'ny antsipiriany ianao alohan'ny fangatahana eVisa ho an'i India.
India dia matetika no hita ho vahiny Travel toeran-kaleha saingy toerana tena feno kolontsaina manankarena sy isan-karazany avy amin'izay azonao antoka ny hamerenana fahatsiarovana isan-karazany sy mahaliana. Raha mpitsangatsangana iraisampirenena ianao izay nanapa-kevitra ny hitsidika an'i India ho mpizahatany dia manana vintana tokoa ianao satria tsy mila mandalo olana be loatra mba hahatanteraka ity dia nandrasana hatry ny ela ity. Ny Governemanta India dia manome Visa elektronika na e-Visa natao ho an'ny mpizahatany ary azonao atao izany mangataka amin'ny e-Visa an-tserasera fa tsy avy ao amin'ny Masoivohon'i India any amin'ny firenenao toy ny Visa taratasy nentim-paharazana vita. Ity Visa fizahan-tany any India ity dia tsy natao ho an'ny mpizahatany mitsidika ny firenena fotsiny mba hahitana maso na fialam-boly fa heverina koa fa hanamora ny fiainan'ireo izay te-hitsidika India noho ny tanjon'ny fitsidihana fianakaviana, havana, na namana .
Fepetran'ny Visa mpizahatany karana
Mahasoa sy manampy toy ny Visa Turista Indianina dia tonga miaraka amin'ny lisitry ny fepetra mila mifanena aminao mba hahafahanao mahazo izany. Tsy misy afatsy ireo mpandeha izay mikasa ny hanao izany mijanona tsy mihoatra ny 180 andro ao amin'ny firenena amin'ny fotoana iray, izany hoe tokony hiverina na handeha amin'ny dianao hivoaka ny firenena ao anatin'ny 180 andro aorian'ny fidiranao amin'ny firenena amin'ny Tourist e-Visa. Tsy afaka mitsangatsangana amin'ny raharaham-barotra any India amin'ny Visa Tourist Visa ihany koa ianao, fa ny tsy fivarotana ihany. Raha mbola mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny Visa Turista any India ianao ary koa ny fepetra takiana amin'ny e-Visa amin'ny ankapobeny, dia azonao atao ny mangataka Visa Tourist ho an'i India.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny Visa Touriste Indiana dia natao ho an'ireo mpandeha iraisampirenena izay te-hitsidika ny firenena ho mpizahatany mba hitsidika ireo toerana fizahan-tany malaza rehetra ary handany fialan-tsasatra mahafinaritra any amin'ny firenena na ireo izay te-hamangy ireo olon-tiany monina. ao amin'ny firenena. Saingy ny India Tourist Visa dia azo ampiasain'ny mpandeha iraisampirenena tonga eto hanatrika fandaharana yoga mandritra ny fotoana fohy, na hanaraka fandaharam-pianarana izay haharitra mihoatra ny 6 volana ary tsy hanome mari-pahaizana na diploma diplaoma, na handray anjara amin'ny asa an-tsitrapo izay tsy mihoatra ny faharetan'ny 1 volana. Ireo no hany antony mety ahafahanao manao fangatahana amin'ny Tourist Visa ho an'i India.
Karazana Visa mpizahatany karana
Hatramin'ny taona 2020, ny Tourist e-Visa dia misy ao karazany telo samy hafa miankina amin'ny faharetany ary ny mpitsidika dia tokony hanao fangatahana ho an'ilay mifanaraka indrindra amin'ny tanjon'izy ireo hitsidika an'i India.
Ny voalohany amin'ireo karazana ireo dia ny Visa 30 mpizahatany India, izay ahafahan'ny mpitsidika mijanona ao amin'ny firenena mandritra ny 30 andro manomboka amin'ny daty nidirany ao amin'ny firenena ary Visa fidirana indroa, izay midika fa afaka miditra indroa ao amin'ny firenena ianao ao anatin'ny vanim-potoanan'ny valin'ny Visa. Ny e-Visa mpizahatany 30 Andro dia miteraka fikorontanan-tsaina ihany koa satria misy daty famaranana voalaza ao amin'ny e-Visa fa io no daty tokony hidiranao amin'ny firenena fa tsy ilay andro alohan'ny tokony hivoahanao ny firenena. Ny daty ivoahana dia hofaritana amin'ny datin'ny fidiranao ao amin'ny firenena ary 30 andro aorian'ny daty voalaza.
Ny karazany faharoa an'ny Tourist e-Visa no Visa mpizahatany India 1 taona, izay manan-kery mandritra ny 365 andro hatramin'ny datin'ny namoahana ny e-Visa. Zava-dehibe ny manamarika eto fa tsy toy ny Visa 30 Mpizahatany ny valim-panadinana Visa 1 Taona dia mamaritra ny datin'ny famoahana azy fa tsy ny datin'ny fidiran'ny mpitsidika ao amin'ny firenena. Ankoatr'izay, ny Visa 1 mpizahatany dia a Visa fidirana misimisy, izay midika fa afaka miditra ao amin'ny firenena imbetsaka ianao ao anatin'ny vanim-potoana vanim-potoanan'ny Visa.
Ny karazany fahatelo ny Tourist e-Visa no 5 taona India Tourist Visa, izay manan-kery mandritra ny 5 taona hatramin'ny datin'ny namoahana azy ary izy io koa dia Visa fidirana misimisy.
Betsaka amin'ireo takiana amin'ny fangatahana Visa any India mpizahatany no mitovy amin'ny an'ny Visa hafa. Anisan'izany ny kopia elektronika na notarafina tamin'ny pejy voalohany (biografika) an'ny pasipaoron'ny mpitsidika, izay tsy maintsy ilay pasipaoro mahazatra, tsy diplaomatika na karazana pasipaoro hafa, ary tsy maintsy mijanona mandritra ny 6 volana farafahakeliny hatramin'ny andro nidirana tao India, raha tsy izany dia mila manavao ny pasipaoronao ianao. Ny fepetra takiana hafa dia ny kopian'ny sarin'ny lokon'ny mpitsidika ny fomba fandefasana pasipaoro, adiresy mailaka miasa, ary carte de debit na carte de crédit amin'ny fandoavana ny sarany fangatahana. Ny mpangataka dia mety angatahina koa hanome porofon'ny fanananao vola ampy hamatsy vola ny diany mankany sy mijanona any India, ary koa a tapakila miverina na mandroso ivelan'ny firenena. Na dia tsy mitaky anao hitsidika ny Masoivoho Indianina aza ny e-Visa, dia tokony ho azonao antoka fa manana pejy banga roa ny pasipaoronao hijanonan'ny mpiasan'ny fifindra-monina ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Toy ny e-Visa hafa, ny tompon'ny Visa Mpizahatany Indiana dia tokony hiditra ao amin'ny firenena avy any Lahatsoratra momba ny fanaraha-maso ny fifindra-monina izay misy seranam-piaramanidina 28 sy seranan-tsambo miisa 5 ary ny mpihazona dia tsy maintsy mivoaka avy ao amin'ny Poste de Immigration Check izay ekena koa.
Ankehitriny rehefa manana ny fampahalalana rehetra manan-danja momba ny Visa Mpizahatany Indiana ianao dia afaka mangataka mora foana amin'izany. The fangatahana fangatahana ho an'ny Tourist Visa ho an'i India dia tsotra sy tsotra ary raha mihaona amin'ny rehetra ianao fepetra takiana ary manana izay rehetra takiana aminao hangataka izany dia tsy hahita olana amin'ny fangatahana ianao. Raha toa kosa ka mila fanazavana ianao tokony Mifandraisa aminay amin'ny helpdesk ho fanohanana sy fitarihana.
Raha misy ifandraisany amin'ny orinasa ny tanjon'ny fitsidihanao dia mila mangataka an Business Visa (eVisa India ho an'ny fitsidihana orinasa).